Caawin hel - El Centro de la Raza
El Centro de la Raza waxay bixisaa 43 barnaamijyo iyo adeegyo dhinacyada carruurta iyo dhalinyarada, adeegyada aadanaha iyo xaaladaha degdegga ah, waxbarashada iyo dhisidda xirfadda, guriyeynta iyo horumarinta dhaqaalaha, iyo u doodista iyo abaabulka bulshada. Si aad u gaadho miiskayaga hore, fadlan wac (206) 957-4634 ama iimayl u dir ayuda@elcentrodelaraza.org. Fadlan wac 2-1-1 si aad u hesho caawinaad saacadaha ka dambeeya.
Waxaan aaminsanahay in bulshadeenu ay si wax ku ool ah wax uga qaban karto arrimaha qotada dheer ee horyaalla adduunkeenna iyada oo loo marayo ka -qaybgalka bulshada, abaabulka hoose iyo dhaqdhaqaaqa bulshada.
Continue reading "U -doodista & Abaabulka Bulshada"
Awoodsiinta dhalinyarada ee bulshadeena.
Continue reading "Adeegyada Dhalinyarada"
Xafiiska Seattle Main Line (206) 957-4634. Khadka Wayn ee Xafiiska Dawlada Dhexe (360) 986-7040. iimaylka ayuda@elcentrodelaraza.org caawimaad.
Wax ka qabashada baahiyaha carruurta bulshadeena.
Continue reading "Barnaamijyada Carruurta"
Xarunta Adeegga Bulshada ee Frances Martinez waxay siisaa qoysaska adeegyada aasaasiga ah iyo kuwa degdegga ah.
Dhisidda isku-filnaansho iyo awood-siin iyada oo loo marayo waxbarashada laba-luqadlaha ah iyo barnaamijyada dhisidda xirfadda.
Bixinta guryo la awoodi karo, adeegyo isku dhafan iyo ku-jihaysan ku-meelgaar ah oo ku-meelgaar ah oo ku yaal xaafadaha Seattle si loo xoojiyo bulshadeena.
Continue reading “Horumarinta Guriyeynta & Dhaqaalaha”
Liiska Ilaha Bulshada
Hoos waxaa ku yaal liiska inta badan agabka bulshada iyo barnaamijyada gargaarka bilaashka ah. Helitaanka agabku si joogto ah ayaa isbeddelaya, markaa fadlan booqo boggaga hoose si aad u hesho macluumaadka ugu badan ee hadda jira.
Continue reading "Liiska Ilaha Bulshada"